Azure, အပိုင်း II ကိုအပေါ် Linux ကို Run ဖို့ကိုဘယ်လို: ပိုမိုအသေးစိတ် - ၎င်း၏ Tech မှကျောင်း
Azure, အပိုင်း II ကိုအပေါ် Linux ကို Run ဖို့ကိုဘယ်လို: ပိုမိုအသေးစိတ်
ဤသည် Azure အပေါ် Linux ကိုအပြေးအကြောင်း Two-အပိုင်းဘလော့ဂ်အစီအစဉ်၏ဒုတိယဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းအုပ်ကြီးဘလော့ဂ်အပိုင်း၌ငါ၏ rudiments အကြောင်းကိုပြောဆိုသော Azure အပေါ် Linux ကိုအပြေး။ ဒီ post မှာတော့ငါအတန်ငယ်ပိုပြီးလေးနက်နှင့် ပတ်သက်. ကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းရှာဖွေစူးစမ်းနေချိန်မှာငါတွေ့ပြီသောအရေးပါသောအစိတ်ကူးများတစ်ဦးသောအဘို့ကိုသို့သွားပါလိမ့်မယ် Azure အပေါ် Linux ကို ယခင်တစ်ဦးအနေဖြင့်တလျှောက်လုံး။
Azure အပေါ် Linux ကို: Up ကိုနှင့်အပြေး
Azure အပေါ် Linux ကို: လုံခြုံရေး, အရွယ်မှာနှင့်ရရှိနိုင်
ရည်တစ်ဦးကအေးမြရှုထောင့် Azure အပေါ် Linux ကိုအပြေး ချည်နှောင်သောချဲ့ထွင်ဖြစ်ပါသည် Linux ကိုကို virtual စက်တွေ အဆိုပါ Azure ခွအေနအေသို့။ ဒါကရိုးသားစွာငါ့ကိုနည်းနည်းတုန်လှုပ်သောအခြားဒြပ်စင်ဖြစ်သည်။ ငါ Linux ကိုရောနှောအဆင်မပြေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်သို့သော်ကျွန်မမိုက်ကရိုဆော့ဖပစ္စည်းများကိုလုံးဝ Azure နှင့်အတူညှိနှိုင်းမယ်လို့ (နှင့်သူတို့ပြုပါ) ထိုမျှော်လင့်။
အဲဒီအခြေအနေကမဖြစ်ထွက်လှည့်။ Azure သို့အထူးညှိနှိုင်းကြောင်း Linux ကိုတိုးပွားရှိပါတယ်။ ဤရွေ့ကားတိုးပွားအများဆုံး Linux distro ပေါ်မှာကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။ သငျသညျ, ကိုစတင်ပိတ်ပစ်နှင့်ပင် Azure အတွင်းပိုင်းကနေ Linux ကိုအရင်းအမြစ်များကိုပြနိုင်ပါတယ်။ Boot တက်မှတ်တမ်းများနှင့်သေဒဏ်စီရင်တိုင်းတာနဲ့တူသောအရာတို့ကိုတှငျမှတျတမျးတငျထားသနေကြသည် Azure နှင့် Azure Portal ကိုအတွင်းပိုင်းကနေတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
ကွဲပြားခြားနားသောချဲ့ထွင်မယ့် Linux ကို virtual machine သို့ထုံမွှန်းခံရဖို့ script များခွင့်ပြုမယ့် scripting နည်းတိုးပွားဥပမာ, အရမ်းရှိပါတယ်။
ငါ့အဘို့, အပေါ်တွင်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုဖြန့်ဝေကွန်ပျူတာ၏အဓိကအားသာချက်ဖြစ်ပါတယ်။ မလိုအပ်သည့်အခါကန့်သတ်စီမံဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနှင့်အမှန်တကယ်မလိုအပ်ခဲ့ဘူးအခါန့်သတ်ချက်က de-ပြင်ဆင်မှုဖြန့်ဝေကွန်ပျူတာ၏အခြေခံအုတ်မြစ်ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကို virtual စက်တွေလုံးဝ On-ဝုဏ်အတွင်းဆာဗာကိုလယ်ယာနှင့်အတူယင်ကောင်ပါဝင်သည်နိုင်ပါတယ်နေစဉ်ကအားကောင်းရန်ကိရိယာများနှင့် programming ကိုတက်စောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်ကြောင်းသတ်ဖြတ်နေစဉ်, အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်ဖြန့်ဝေကွန်ပျူတာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းပြန်စီ။ သဘာဝကျကျဝန်၏အမြင်တွင်, ပြက္ခဒိန်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်တစ်ခုလက်တန်းရဝုဏ်အပေါ်ချင့်စကေးသို့မဟုတ် Azure စက္ကူကို virtual စက်တွေ။ ဤသည်စွမ်းရည်များအတွက်လက်လှမ်းဖြစ်ပါသည် Windows နှင့် Linux ကိုကို virtual စက်တွေ စကေးအစုံအဖြစ်။ Linux ကိုစကေးအစုံထွက်စကေးသို့မဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မရှိမဖြစ်ကွပ်မျက်တိုင်းတာ, ဥပမာ, Processor ကိုသို့မဟုတ်မှတ်ဥာဏ်အလေးချိန်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ Linux ကို Azure ချဲ့ထွင် Azure မှသတ်မှတ် Virtual Machine ကိုစကေးအနေဖြင့်အခြေခံကွပ်မျက်သတင်းအချက်အလက်သတင်းပို့ပြီးတော့အားဖြင့် Azure autoscale စွမ်းရည်ထိန်းချုပ်မှုယူဆ။ ဒီ သာ. အစိတ်အပိုင်းကို virtual machine ပေါ်တွင် run နေသည့်ပမာဏမှလုံးဝရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတာနဲ့ပိုဒီမှာဇာတ်လမ်း Linux ကိုစကေးအစုံလုပ်နဲ့ Windows စကေးအစုံကဲ့သို့တူညီသောအလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
ရှင်းနေသည်မှာ Linux ကိုကို virtual စက်တွေ စင်မြင့်၏လုံခြုံရေးဒြပ်စင်များ၏ သာ. ကွီးမွတျစိတျအပိုငျးရှိသည်။ Microsoft ကထည့်သွင်းနှင့်လုံခြုံရေးအတွက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ချပြီးအပေါ်စောင့်ရှောက်တော်မူကြောင်းကိုအတိတ်။ ဤသည်ကို Microsoft မှလေးစားမှုနှင့်အတူအချို့သောကုသိုလ်ဖြစ် signal ကိုမဟုတ်ပါဘူး။ မိုဃ်းတိမ်ကိုပေးသွင်းအခြားမည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးထက်လုံခြုံရေးပိုမြင့်မားသောငွေပမာဏကိုလိုအပ်ပါတယ်။ တစ်ဦးလက်လီအရောင်းဆိုင်မှာသတင်းအချက်အလက်ချိုးလည်းမရှိကွောငျးကိုချွတ်အခွင့်အလမ်းတွင်ထိုလက်လီအရောင်းဆိုင်ထိခိုက်ယူပါလိမ့်မယ်မရှိသေးပါဖြစ်ကောင်းသတင်းအချက်အလက်ယေဘုယျအားဖြင့်မိမိတို့၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာမဟုတ်ကြောင်းမြေပြင်ပေါ်တွင်ရှင်သန်ရပ်တည်ပါလိမ့်မယ်။ Azure အတွက်မှတ်သားဖွယ်သတင်းအချက်အလက်ကှဲထှကျရှိကွောငျးကိုချွတ်အခွင့်အလမ်းတွင်, ထို့နောက် Azure သေပြီဖွယ်ရှိသည်။ client များဟာသူတို့ရဲ့အကျိုးတူအရင်းအမြစ်များကို Azure အတွက်ခိုလှုံနေကြသည်ဟုခံစားရဘူးသောအဖြစ်အပျက်မှာတော့သူတို့ Azure အသုံးချသွားကြသည်မဟုတ်။ Microsoft ကသူတို့ Azure သေလွန်သောသူတို့သည်မလိုအပ်ပါဘူးကြောင့်လုံးဝသိသာစေတော်မူပြီ။
Azure အတွင်းအပြင်လုံခြုံရေးမှာ gander ယူနှစ်ခုချဉ်းကပ်မှုရှိပါတယ်: လုံခြုံရေးအသင့်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာအင်ဂျင်နှင့်လုံခြုံရေးအတွက်ကွပ်မျက်ခံရ။ အင်ဂျင်လုံခြုံရေးအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းအတညျပွု၏ကြီးမားသောအုပ်စုတစ်စုမှညီ။ ကျွန်မလုံခြုံရေးကောင်လေးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘဲ Azure လုံခြုံရေးစက်များ၏ rundown ရုံငါ့ကိုအမှန်တကယ်ကြီးမြတ်လှပါတယ်။
သငျသညျရှိ Azure သူတို့ကိုရှိပါတယ်တဲ့လျောက်ပတ်သောရိုက်ချက်ဖြစ်ပါသည်, သို့မဟုတ်လိမ့်မည်မကြာမီလိုအပ်ကြောင်းအထူးသဖြင့်လုံခြုံရေးအတည်ပြုချက်ရှိပါတယ်သောဖြစ်ရပ်၌တည်၏။ သငျသညျ https://www.microsoft.com/en-us/TrustCenter/Compliance/default.aspx မှာ Azure လုံခြုံရေးတသမတ်တည်းအတည်ပြုချက်တစ်ခုအသိဉာဏ် rundown ရနိုင်သည်။
ဤသည်မှာပစ္စုပ္ပန် Azure တသမတ်တည်းအတည်ပြုချက်တစ်ဦးသောအဘို့ကိုသာမြန်ဆန်မျက်နှာပြင်, shot ဖြစ်ပါတယ်။
Azure သူ့ဟာသူအတွင်းပိုင်း actualized ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်သတင်းအချက်အလက်လုံခြုံရေးအစီအမံသို့ရာတွင်သင်သည် Azure ၌သင်တို့၏ Linux ကိုပမာဏနဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်အနည်းငယ်လုံခြုံရေးပျေါလှငျရှိသည်:
လုံခြုံရေးအဖွဲ့များစုစည်း။ လုံခြုံရေးအဖွဲ့များသို့မဟုတ် NSGs Azure ကို virtual စနစ်များအတွင်း၌ firewalls များအဖြစ်လည် Organize ။ NSG စံချိန်စံညွှန်းလိပ်စာနှင့်ဆိပ်ကမ်းမြင်ကွင်းကိုအတွက်အရင်းအမြစ်နှင့်ရည်မှန်းချက်အားဖြင့်အတွင်း, အပြင်လှုပ်ရှားမှုကိုကန့်သတ်နိုင်ပါတယ်။ NSGs တစ်ဦးချင်းစီကို virtual စက်တွေဖို့ဒါမှမဟုတ်တပြင်လုံးကို subnets ချိတ်ဆက်ထားနိုင်ပါတယ်။
စတီယာရင်စည်းကမ်းများ။ directing စံချိန်စံညွှန်းအရင်းအမြစ်, ရည်မှန်းချက်နှင့်ဆိပ်ကမ်းအလငျး၌အထူးသဖြင့်အဆုံးအလေးပေးသို့မဟုတ်လိပ်စာများမှတဆင့်သင်တန်းလှုပ်ရှားမှုရန်သင့်အားခွင့်ပြုသည်။ သင်တစ်ဦးလမ်းပိုင်းအစီအစဉ်အတွက် gadget ကမှတဆင့်လှုပ်ရှားမှုကိုတွန်းအားပေးရန်အခြေခံမူ directing တစ်ဦးကို virtual machine နဲ့ဒီဇိုင်းအများကြီးမပါဘဲသင်သည်တတ်နိုင်သင့်ကိုယ်ပိုင်အထူးသဖြင့် firewall သို့မဟုတ်ပြန်လည်သုံးသပ်စက်ရှိသည်သောချွတ်အခွင့်အလမ်းပေါ်မှာ။
ပွင့်လင်း IP လိပ်စာကို။ virtual စက်တွေကို virtual စနစ်များအတွက်အပြေးစောင့်ရှောက်။ သင်တန်းကိစ္စနှင့်အမျှထို systems ဝဘ်မှလက်လှမ်းမရှိကြပေ။ တစ်ခုကပွင့်လင်း IP address ကိုတစ်ဦး virtual machine မှမဆိုချက်ချင်း web based access များအတွက်လိုအပ်သည်။
ကို virtual hard drive တွေအလျင်အမြန်စေလွှတ်။ virtual hard drive တွေယခုအလွန်နေဆဲအာမခံသတင်းအချက်အလက်ပေးခြင်း Azure အတွက် encoded နိုင်ပါသည်။ Linux ကိုကို virtual hard drive ကိုစာဝှက်စနစ်ဟာ dm-crypt မီးမောင်းထိုးပြအသုံးချနှင့်အမှတ်မှာကုဒ်သွင်းထားခဲ့ကြသည်နှင့်အ Azure သို့ပြောင်းရွှေ့ကြောင်း Azure သို့မဟုတ် VHDs အတွက်လုပ်ကို virtual ခက်ခဲပြား (VHDs) အတွက်လက်လှမ်းဖြစ်ပါတယ်။
အတွက် အခန်း, Robot နဲ့ပြန်လုပ်အတွက် DevOps အရေးပါလှပေသည်။ ကံကောင်းတာက Microsoft ကအဘို့, နှစ်ဦးစလုံးပေးသောစွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးဆဲ rundown ရှိသေး၏။ Azure များအတွက်ဒေသခံထောက်ခံမှုရှိပါတယ် စားဖိုမှူးများနှင့်ရုပ်သေး။ Azure ထိုနည်းတူ PowerShell အလုပ်ဖြစ်စဉ်များ backings ကြောင်း၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အထူးသဖြင့်စက်ရုပ်မူဘောင်ရှိပါတယ်။ စက်မှုလယ်ယာအဆိုပါသို့ထွက်ရောက်ရှိ Linux ကိုကို virtual စက်တွေ script ကိုပြုတ်ရည်များနှင့် Fancy ပြည်နယ် setup ကိုတစျဆငျ့။ တိုင်း Azure သယံဇာတနှင့်တိုင်းတစ်ခုတည်း Azure စွမ်းရည်များအတွက် REST-based API ကိုအောင်များအတွက် JSON-based ရှင်းလင်းသည့်စနစ်နှင့်အတူကြောင့်ခြုံနဲ့စက်ရုပ်နှင့် DevOps များအတွက်အစိုင်အခဲဇာတ်လမ်းရှိသေး၏။
သငျသညျ Azure အပေါ် Linux ကိုအလုပ်ဖြစ်စဉ်များ running အကြောင်းပိုမိုပြွီးအပေါ်စိတ်အားထက်သန်သောချွတ်အခွင့်အလမ်းတွင်, Global Knowledge Azure အပေါ် Linux ကိုပြေးဖို့အထူးအာရုံစိုက်တချို့ရေတို, စိတ်ကူးယဉ်သင်တန်းများစုဝေးလျက်ရှိသည်။ အဆိုပါသင်တန်းများကိုအစား by-step ဓာတ်ခွဲခန်းများ Item ချဲ့မနေတော့အားဖြင့်သင်တို့အောင်၏အခက်အခဲများပေါ်မူတည်သည်။ အဆိုပါသင်တန်းများကိုသင်သည်ကျယ်ပြန်ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်တာဝန်တွေပေးပြီးသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အထူးအစီအစဉ် actualize ရန်သင့်အားခွင့်ပြုသည်။ လိုအပ်သောအဖြစ်အခက်အခဲများအမှုကိုချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ကနေပြပွဲနှင့်သင်နှင့်အတူပိုပြီးအကူအညီလိုအပ်နိုင်ပါသည်ဆိုခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်များအတွက် nitty gritty လမ်းညွှန်ချက်များ, သင်ပြောင်းလဲနေသောအကူအညီနဲ့ပေးပါ။ သင်လိုအပ်ဘယ်လောက်အကူအညီနဲ့ကောက်နှင့်သင်ခေါင်းစဉ်မာစတာတို့ကစာရင်းစစ်ဘို့ကတင်သွင်းနေတဲ့စမ်းသပ်မှုပြီးစီးသည့်အခါဖို့အခွင့်အလမ်းရရှိမည်ဖြစ်သည်။
Azure, အပိုင်းကျွန်မအပေါ် Linux ကို Run ဖို့ကိုဘယ်လို: အဆိုပါအခြေခံ